स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- कसैले पैसा लिएर कोरोनाको खोप लगाउने भने, उजुरी गर्नू – Dailny NpNews
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- कसैले पैसा लिएर कोरोनाको खोप लगाउने भने, उजुरी गर्नू
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १४, २०७८ समय: १८:३८:३५
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कसैले पैसा लिएर कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप लगाइदिने कुरा गरे तत्काल उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सरकारले अहिलेसम्म नि:शुल्क लगाइरहेको भन्दै कसैले पनि शुल्क मागेर खोप उपलब्ध गराउने कुरा गरेमा तुरून्त स्थानीय प्रशासन वा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न भनेको छ।
अहिले खोप उमेर समूह तथा अत्यावश्यक क्षेत्र अनुसारले पालै-पालो वितरण भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्तो ठगीमा नपर्न सुझाएको हो। यद्यपि अहिले खोप अभियान भने सञ्चालनमा छैन।
यो विमर्श म एउटा स्वीकारोक्तिबाट सुरू गर्न चाहन्छु— सरस्वती प्रधानले रूपा सुनारलाई जे गरिन्, त्यो मेरी दिदी, दाइ, काका, माइजूले अर्थात् मेरा नजिकका धेरैजसो नातेदारले गर्न सक्थे। उनीहरूले आफू बस्ने घर दलितलाई जातकै कारण भाडामा नदिन सक्थे। हाम्रो समाज एक किसिमको जात व्यवस्थाले अझै जकडिएको छ। छुवाछुत कति ठूलो अपराध हो भनेर हामीले घर, परिवारमा छलफल गर्ने गरेका छैनौं। छुवाछुतलाई सामान्य ठानेका छौं। बनाएका छौं। यो कानुनी हिसाबले दण्डनीय अपराध हो भन्ने धेरैलाई थाहा पनि नहोला।
कुरा मेरो परिवारको मात्र होइन, हामी सबैको परिवारको हो। रूपा सुनारलाई जुन व्यवहार सरस्वती प्रधानले गरिन्, त्यो सरस्वती ढकाल, सरस्वती राई, सरस्वती झा, सरस्वती थारू, सरस्वती माझी कसैले पनि गर्न सक्थे। त्यसैले यो नेवार विरूद्धको मुद्दा होइन। नेवारहरूले कन्सिरी तताउनुपर्ने जरूरी छैन। यो कुनै खास समुदायविरूद्धको मुद्दा पनि होइन। यदि कसैका विरूद्ध हो भने, हामी सबैका विरूद्ध हो। समयले हामी सबैलाई ऐना देखाएको हो। त्यो ऐनामा हाम्रो अनुहार मैलो देखिएको हो। सवाल, यो मैलो अनुहार हामीले कसरी पुछ्ने भन्ने हो।
समाजमा यति जबरजस्त रूपमा बसेको छुवाछुतबारे हामीले हिजै कुरा गर्नुपर्थ्यो, गरेनौं। हिजै बाटो पहिल्याउनु पर्थ्यो, पहिल्याएनौं।
पहिलो, बबरमहल प्रकरणबारे थप छलफल र बहस गर्ने, ताकि यसका विभिन्न आयामबारे मानिसहरू थप प्रष्ट होऊन्।
कतिपय मानिसले ‘अब यो प्रकरण धेरै नउचालौं, समाजलाई थप द्वन्द्वतिर नधकालौं’ भनेका छन्। उनीहरूको नियतमा शंका नगरौं। राम्रै मनसायले, समाज अझ बिथोलिएला भन्ने चिन्ताले नै उनीहरूले यसो भनेका होलान्। कतिपयलाई लागेको छ, सामसुम भइसकेको समस्या किन गिजोल्ने! निभिसकेको आगोको झिल्को फेरि किन सल्काउने!
झिल्को यसपालि निभ्यो होला। तर समस्या ज्यूँकात्यूँ राखेपछि झिल्को फेरि उठ्नेछ। त्यसलाई कुनै दिनको आँधीले आगोको ठूलो लप्का बनाउनेछ। अनि त्यसले हामीले कल्पना नगरेको क्षति गर्नेछ।
छुवाछुतबारे जुन विषाक्त तर्कहरू यसपालि बाहिर आए, पढे-लेखेकाहरू जसरी मैदानमा उत्रिए, त्यसले छुवाछुतबारे थप छलफल कति जरूरी छ, यसबारे बुझ्नु र बुझाउनु कति जरूरी छ भन्ने छ्याङ्ग भयो।
सबभन्दा आधारभूत कुरा, छुवाछुत हटाउने हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हो। कसैले चुनौती दिन सक्दैन, प्रतिवाद गर्न सक्दैन वा दबाउन सकिन्छ भनेर ऊमाथि थिचोमिचो जारी राख्नु घोर अनैतिक काम हो। छुवाछुत सहेर चालीस लाख दलित सधैं चुपचाप बस्छन् र त्यो शान्त समाजमा म निर्वाध विचरण गर्छु भन्ने कल्पना व्यर्थ हुन्छ। आज रूपा सुनार र दीपा नेपाली उठेका छन्, भोलि अरू उठ्छन्। त्यसैले छुवाछुत विरूद्ध आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी छ भन्ने नठान्नेले पनि भविष्यको खतरा टार्नका निम्ति छलफल र काम गर्न जरूरी छ।
पहिलो तर्क, आफ्नो घर जसलाई भाडामा दिन मन लाग्यो, दिन पाइन्छ। कुनै व्यक्तिलाई दिन मन नलागे, नदिन पाइन्छ। कानुन पनि पढेका कतिको तर्क छ— २०६८ सालमा जारी छुवाछुत सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक ठाउँमा भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेको छ, त्यसैले आफू बस्ने घरमा दलितलाई भाडामा राख्दिनँ भन्दा छुवाछुत गरेको हुँदैन।
दोस्रो तर्क, रूपा र सरस्वती बीचको फोन संवादमा कुनै छुवाछुत र भेदभाव सुनिँदैन, देखिँदैन। सरस्वतीले रूपालाई घर किन दिन सक्दिनँ भनेर आफ्नो बाध्यता राम्ररी भनेकी छन्।
घरबेटीले अघिल्लो दिनै रूपाको जात थाहा पाएकी थिइन्। त्यसैले कोठा दिन अन्कनाइन्। मुखै भन्न सकिनन्। भोलिपल्ट फोनमा अप्ठ्यारो मान्दै कोठा नदिने कुरा सुनाइन्। त्यसैले संवादमा तिक्तता थिएन। उनले राम्रै लवजमा बोलिन्। तर मिठो बचनले तितो सत्य बदल्दैन। अन्तिम तथ्य फेरि पनि त्यही हो— रूपाले जातका कारण कोठा पाइनन्। अर्थात् घरबेटीले उनीमाथि छुवाछुतको व्यवहार गरिन्।
तेस्रो र सबभन्दा विषाक्त एउटा तर्कले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। कथित उच्च जातका मानिसहरूले घत लागेर त्यो सेयर गरिरहेका छन्- तिमीले जातका कारण कोठा पाएनौं। हामीले जातका कारण ‘कोटा’ पाएनौं। आफू दलित भनेर राज्यसँग ‘कोटा’ पनि माग्ने, अनी छुवाछुत भयो भनेर ‘रुवाबासी’ पनि गर्ने। आत्मसम्मान खोज्ने भए पहिले कोटा त्याग, हाम्रो भाग खोस्न छाड। हामीसँग समान भएर आऊ, अनि हामी सम्मान दिऊँला।
आरक्षणको सुरूआत नेपालमा दोस्रो जन-आन्दोलनपछि पछि मात्र भएको हो। के २०६४ सालअघि नेपालमा छुवाछुत थिएन? के तिमीले छुवाछुत गरेका थिएनौं? दलितले कोटा पाएपछि मात्र तिमीले छुवाछुत सुरू गरेका हौ?
जंगबहादुर राणाले जारी गरेको १९१० को मुलुकी ऐनले समाजमा व्याप्त जात प्रथालाई वैधता मात्र दिएन, थप कसिलो बनायो। छुवाछुत कानुनी रूपमै वैध भयो। दलितहरूको जग्गा राख्ने अधिकार खोसियो। एकातिर सामाजिक हिसाबले उनीहरू उत्पीडनमा परे, कमारा-कमारीसम्म बनाइए। अर्कोतिर जुन युगमा आम्दानीको मूल स्रोत कृषि थियो, त्यो बेला उनीहरूबाट जग्गाको हक खोसियो। यसरी दलितहरू सामाजिक, आर्थिक शोषणले समाजको पिँधमा पुगे।
आरक्षणले आफ्नो भाग खोसेको चिन्ता गर्नेहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु— एकछिन गम खाएर भन, ‘कसको भाग कसले खोस्यो?’
युगौंदेखिको शोषणले समाजको पिँधमा पुगेका दलितहरूले वर्चश्वशाली समुदाय र वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर राजकाजको ठाउँमा पुग्न कठिन थियो। दलितसहित पछि परेका अरू समुदायलाई पनि बाहिर राखेर सीमित समुदाय र वर्गले राजकाज चलाउनु मध्य युगमा ठीक थियो होला। एकतन्त्रीय शासनमा पनि ठीक थियो होला। लोकतन्त्रमा भने त्यो किमार्थ जायज हुँदैन। त्यसैले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशी लोकतन्त्रको आवाज उठ्यो। त्यसपछि राज्यले कानुन ल्याएर आरक्षणको नीति अघि बढाएको हो।
अर्को कुरा, आरक्षण पाएकै भरमा कसैले छुवाछुत र विभेद सहनुपर्ने तर्क जायज हो भने महिला, जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका मानिस, पिछडिएको क्षेत्रका मानिस सबैलाई आरक्षण छ। त्यसो भए, उनीहरू सबैलाई भेदभाव गर्ने हक आरक्षण नपाउने कथित उच्च जात वा वर्गलाई प्राप्त भयो? जनजातिका रूपमा नेवारहरूले पनि आरक्षण पाएका छन्, अब त्यही कारणले नेवारहरूलाई हेप्ने हक बाहुन-क्षेत्रीलाई प्राप्त भयो?
सौदाबाजी नेतृत्वको धेय सत्ता हो। सत्तामा पुग्न उसले निरन्तर सौदा गर्छ। लेनदेन गर्छ। सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउन एउटा विषय उठाउँछ, छोड्छ। फेरि अर्को उठाउँछ। उसको अर्जुन दृष्टि भने सत्तामै केन्द्रित हुन्छ। जब सत्तामा पुग्छ उसले सारा भर्‍याङ बिर्सिन्छ। सत्ताका लागि अब सबै कुरा सौदाबाजी गर्न थाल्छ।
परिवर्तनकारी नेतृत्व मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ। उसलाई सत्ताको खासै अर्थ रहँदैन। सत्तामा पुगिहाले आफूले सोचे अनुसारको परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गर्छ। जस्तो, बिपी कोइराला।
कतिलाई सत्तामा जान कुनै चासो हुँदैन। आफूले चाहेको परिवर्तन प्राप्त भएपछि ऊ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ। सत्ता अरूलाई छाडिदिन्छ। जस्तो, गणेशमान सिंह। राणासँग, पञ्चयातसँग लडेर प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो उनलाई। उनको अर्जुन दृष्टि त्यसमै थियो। प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आउँदा पनि त्यसले उनलाई हल्लाएन।
अहिलेका सबै नेता सुरूदेखि नै ‘सौदाबाज’ थिए म भन्दिनँ। तर परिवर्तनको आकांक्षा उनीहरूमा मन-मस्तिष्कमा बलियोसँग बसेको भने होइन रहेछ। जेका लागि भनेर उनीहरूले राजनीति सुरू गरे, त्यसमा अडिने तागत र इच्छाशक्ति उनीहरूसँग रहेनछ। उनीहरूसँग त्यो तागत बरकरार रहेको भए आज दलितहरूले यो दिन भोग्नु पर्थेन। आजका कुन स्थापित दलको एजेन्डा छुवाछुतमुक्त समाज थिएन र?
कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै छुवाछुतको विरोध गरेको हो। एमालेको मूल भंगालो मालेले भूमिगत कालदेखि नै छुवाछुतरहित समाजको एजेन्डा बोकेकै हो। माओवादीले त झन् दलित मुक्तिका लागि भनेर कैंयनलाई हतियारै थमायो।
यिनै पार्टी आज राजनीति र सत्ताको केन्द्रमा छन्। अनि दलितको बेहाल छ। शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ जसरी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन प्रहरी चौकी गए, त्यसले एमालेमा आएको राजनीतिक बिचलन मात्र देखाउँदैन, राजनीति कतिसम्म भ्रष्टीकरण हुँदैछ भन्ने देखाउँछ। यो भ्रष्टीकरण रोक्न यसपालि राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ।
बबरमहल प्रकरणपछि हामी सबैको काँधमा एउटा अभिभारा छ— जातका आधारमा कसैलाई घरभाडा नदिनु छुवाछुत हो भन्ने आधारभूत ज्ञान मुलुकका कुनाकुनामा पुर्‍याउने। आगामी दिन कसैले त्यसो गरे जेल जानुपर्छ भन्ने चेतना फैलाउने। भविष्यमा त्यस्तो भएमा तदारूकताका साथ कानुनी कारबाही अघि बढाउने।
यसनिम्ति हरेक मानिसका कान-कानमा सन्देश पुर्‍याउन मोबाइल फोनको उपयोग गर्ने। अहिले जसरी मुख्य दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत कोरोनाको सन्देश हरेक मान्छेको मोबाइलमा पुग्छ, त्यसैगरी छुवाछुत र त्यसको कानुनी व्यवस्थाबारे सूचना दिने। ताकि हरेक मानिसले छुवाछुत कति गम्भीर कसूर हो र त्यसवापत् जेल सजाय हुन सक्छ भन्ने प्रस्टसँग बुझून्।
प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंले प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा धेरैपटक सम्बोधन गर्नुभयो। पछिल्ला महिनामा त यति धेरैपटक सम्बोधन गर्नुभयो, मानिसहरूलाई वाक्कै बनाउनुभयो। तर मानिसले ती कुनै सम्बोधन सम्झिने छैनन्। कुनै पनि सम्बोधनका लागि तपाईंलाई सम्झिने छैनन्।
तपाईं अब कति दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ थाहा छैन। दुई-चार दिन वा दुई-चार वर्ष बस्नुहोला। चाँडै कुर्सीबाट उत्रिनुपर्ने सम्भावना नै धेरै देख्छु म।
त्यसैले सत्ताबाट उत्रिनु अघि नै राष्ट्रका नाममा एउटा यादगार सम्बोधन गर्नुहोस् र भन्नुहोस्— आवश्यक परे म कानुन संशोधन गर्छु। अब दलितलाई जातका आधारमा कोठा नदिने लगायतका छुवाछुत कसैले गरे त्यसले जेल जानुपर्नेछ। राज्य प्रशासनले कडाइसाथ यो कानुन लागू गर्नेछ।
यो पनि भन्नुहोस्— सबै राजनीतिक पार्टी र मेरा राजनीतिक सहकर्मीलाई यो कानुन लागू गर्न र मुलुकलाई छुवाछुतको धब्बाबाट मुक्त गर्ने काममा हात बढाउन म अनुरोध गर्छु।
मलाई विश्वास छ, त्यो सम्बोधनका लागि तपाईंलाई मानिसहरूले जीवन पर्यन्त सम्झनेछन्।
तर जुन राजनीतिक-सामाजिक रूझान पछिल्ला दिनमा तपाईंमा विकास भएको छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास भने मलाई छैन। त्यसैले अरू सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न म अनुरोध गर्छु, ताकि यसमा आम सहमति जुटोस्। भोटको राजनीतिबाट कोही नतर्सियोस्।
यो आम सहमति जुटाउन सबै दलमा भएका दलित सांसदको महत्वपूर्ण भूमिका छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरेर २६ जना दलित सांसद छन्। त्यसमध्ये तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने २३ जना संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप दलितको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद बनेका हुन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आरक्षणमार्फत् दलित सांसदको प्रतिनिधित्व उनीहरूले मुलुकको हितसँगै दलितहरूको हित र अधिकारबारे पनि बोल्छन् भनेर गराइएको हो।
आदरणीय दलित सांसदज्यूहरू, तपाईंहरूको जीवनकालकै सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा— छुवाछुतको मुद्दा— अहिले सतहमा आएको छ। र तपाईंहरूले यसलाई ‘लजिकल एन्ड’ (निष्कर्ष) मा पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ। तपाईंहरू एकजुट हुनुहोस्। आ-आफ्नो दलका नेतालाई घचघच्याउनुहोस्। आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठूलो सामाजिक परिवर्तनका लागि दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुहोस्।
लामो राजनैतिक संघर्ष गरेका भ्लादिमिर लेनिनको एउटा यादगार भनाइ छ— समाज यस्तो समयबाट गुज्रिन्छ, जहाँ दशकौंसम्म केही हुन्न। अनि फेरि केही यस्ता हप्ता आउँछन्, जहाँ दशकौंसम्म नभएका परिवर्तन सम्भव हुन्छन्।
तपाईंहरूले पहल गर्नुभएन भने, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन् भने, समाज बलदिएन भने त्यसले चेतना र बिद्रोहले भरिएका, आत्मसम्मानको हुटहुटीले रन्किएका दलित युवाहरू अघिल्लो पुस्ताझैं चुप लागेर बस्ने छैनन्। नयाँ पुस्ताका उनीहरू गाउँ, सहरमा शान्तिपूर्ण बिद्रोह गर्न थालिसकेका छन्। मानिसका रूपमा बाँच्न पाउने माग गर्न थालेका छन्। छुवाछुत विरूद्ध राज्यले बनाएको कानुन समातेर लडिरहेका छन्। यी कानुनले न्याय दिँदैनन्, राज्यले न्याय दिँदैन, आजको राजनीतिले न्याय दिँदैन भन्ने पक्का भएको दिन यी युवामध्ये कसै न कसैले अर्को बाटो समात्नेछ।
सासंदज्यूहरू, त्यसदिन उनीहरूले हिँडेको बाटो गलत हो भन्ने र उनीहरूको प्रतिवाद गर्ने नैतिक हक राजनीतिक दलका नेता, तपाईंहरू र हामीसँग हुने छैन। त्यसैले समय छँदै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोस्।